Kuthetha ukuthini ukuphupha isitulo esinamavili? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngesitulo esinamavili?
2 Athetha ntoni amaphupha esihlalo sabakhubazekile?
3 Intsingiselo yokuphupha ngesitulo esinamavili esingenanto
4 Intsingiselo yokuphupha ngesitulo esinamavili esixakekileyo
5 Intsingiselo yokuphupha uhleli kwisitulo esinamavili
6 Intsingiselo yephupha lesitulo esinamavili esaphukileyo
7 Intsingiselo yokuphupha usenza izitulo ezinamavili
8 Intsingiselo yokuphupha ngesitulo esinamavili kwigumbi lokuhlambela
9 Ukuphupha izitulo ezinamavili kubi?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngesitulo esinamavili?
Ukuhamba ngemilenze yakho kunokubonakala kuyinto eqhelekileyo, kodwa ngamanye amaxesha abantu abanakuyenza kwakhona. Kwimeko apho, ukuphupha isitulo esinamavili kubonisa ukuba kufuneka uzimele ngakumbi kwiimbophelelo zakho. Oku kubonisa ukuba kuya kufuneka uyeke ukuxhomekeka kwabanye abantu phantse kuyo yonke into.
Iphupha elifanayo linokuba neentsingiselo ezininzi kwaye ke kubalulekile ukuba unike ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha. Funa ukukhumbula okwenzekileyo ngakumbi umxholo omtyala wona ephupheni lakho. Emva kokwenza ezi zinto ziya kuba lula kwaye kuya kuba lula kakhulu ukuqonda ukuba kwenzeka ntoni.
Athetha ntoni amaphupha esihlalo sabakhubazekile?
Abantwana kufuneka bakhuliswe el mundo, kodwa ngelishwa oku akwenzeki kwaye kuvela iingxaki. Ukuphupha isitulo esinamavili kubonisa ukukhubazeka ukongeza kulo lonke uxanduva lwakho. Ukuze le meko ishiywe ngasemva, kubalulekile ukuqala ukusombulula zonke iingxaki zakho.
Umxholo wokuzimela kuthetha ukuba nakho ukuhlala wedwa, ke ngoko, ngaphandle koncedo lwabanye. Oku kusebenza kuwo onke amabakala, kodwa kuya kubonakala ngakumbi kubuchwephesha, kuba uya kuma. Kule mihla, kubaluleke kakhulu ukuba yincutshe kwaye sikwazi ukwenza imisebenzi emininzi kangangoko ngexesha elifutshane.
Intsingiselo yokuphupha ngesitulo esinamavili esingenanto
Iingxaki zakho zithathe ixesha lakho elininzi kwaye zenze ukuba izinto zihlale ngonaphakade. Ukukhalaza ngobomi yeyona nto uyenzileyo kwaye ibonisa isidingo sokuhlala ujonga izizathu zokuzithethelela.
Ukuphupha isitulo esinamavili esingenanto kubonisa ukuba kuya kufuneka uqale usombulule zonke iingxaki ngengqondo. Eyona nto ilula kule meko kukuba yonke into iqulethwe entliziyweni yakho, ke sele unazo iimpendulo.
Intsingiselo yokuphupha ngesitulo esinamavili esixakekileyo
Eli phupha libonisa ukuba abanye abantu banokukwenza uzive ungalungiswanga kancinci. Zama ukuthatha iikhosi kwaye ngaphezulu kwako konke ukusebenzela ukuxhathisa kwakho uxinzelelo, kuba eyona nto ikulungeleyo ukuma ngoluhlobo. Kubalulekile ukuqhubeka ngendlela eyahlukileyo kwaye uzame ukumangalisa wonke umntu.
Ukuphupha isitulo esinamavili esihlala abantu luphawu lokuba kufuneka umsuse loo mntu kwaye uhlale apho. Ukuba uyaphakama, ukubanokudinwa okanye nokuba "ungaphezulu" kukhulu kakhulu. Zama ukuya kwicala elinye nawe kwaye akukho xesha uyakubona ukuba yayisisigqibo esifanelekileyo kuwe.
Intsingiselo yokuphupha uhleli kwisitulo esinamavili
Olu hlobo lwamaphupha lubonisa ukuba ngexesha elifutshane uza kufumana umsebenzi omtsha olungcono kunalowo ukuwo ngoku. UThixo ukujongile kwaye ngokufanelekileyo lo msebenzi mtsha uza kuvela ngendlela engalindelekanga.
Ukuphupha isitulo esinamavili kule meko kubonakalisa kakuhle intsimi yomsebenzi wakho xa uwonke. Into ephambili kukuzama ukuhlala unjalo kwaye uhlala ugcina ukholo onalo kuYesu Kristu.
Intsingiselo yephupha lesitulo esinamavili esaphukileyo
Ngexesha elifutshane, ithamsanqa kwicandelo lobungcali nothando luya kunkqonkqoza emnyango ngendlela elungileyo kakhulu. Uthando lwakho olutsha luya kukunika amandla ebomini bakho bonke, ke thabatha ithuba. Ngelixa umsebenzi ongcono uya kukunika negesi entsha njengoko ikuvumela ukuba ufezekise iinjongo ezintsha.
Ukuphupha isitulo esinamavili esaphukileyo kukwabonisa isidingo esongezelelweyo sokufuna umkhombandlela omtsha ebomini bakho. Ngalo lonke ixesha kufuneka ujonge imiceli mngeni eyahlukeneyo kwaye ungahlali, kuba imfihlo kukukhula kakhulu. Namhlanje, abantu bechitha amathuba amatsha besoyika into enokwenzeka.
Intsingiselo yokuphupha usenza izitulo ezinamavili
Iingxaki ezimbini zimnike ithuba elihle lokuba neengxaki ezinzulu kakhulu kwikamva elikufutshane. Ingxaki yokuqala inxulumene namatyala, oko kukuthi, ukuzama ukunqanda ukwenza iindleko ezintsha, kuba kuyingozi kakhulu.
Ingxaki yesibini imalunga nolindelo onalo lwabantu abasondele kuwe. Kubalulekile ukuzama ukubabamba kwaye ulindele okona kulungileyo kuwe, kuba abanye abasayi kuhlala benomdla ofanayo.
Intsingiselo yokuphupha ngesitulo esinamavili kwigumbi lokuhlambela
Eli phupha libonisa isidingo esikhulu sokuhlala sinentloko nentliziyo ecocekileyo. Zama ukukhupha iingcinga ezingalunganga kwaye ucinge ngezinto ezongeza into kubomi bakho ngokubanzi. Khangela ukubonakaliswa, ukulinganisela kunye nokuvisisana kuwo onke amacandelo, kuba kuya kuba yinto engcono kakhulu.
Ukuphupha izitulo ezinamavili kubi?
Hayi, kuba isitulo esinamavili siyindlela yokuhambisa abantu bonke kwaye ke ayisiyonto imbi leyo. Eli phupha libonisa isidingo sokulwa ukuze uphume kweli lizwe, oko kukuthi, kuya kufuneka unike enye into. Zama ukutshintsha indlela oziphethe ngayo kwaye ungoyiki entsha, kuba ithuba elilungileyo linokufumaneka khona.